आँखा चिलायो भन्दै अस्पताल पुगेका व्यक्तिको आँखामा जे भेटियो जसले डाक्टरनै चकित ! - नमुना पोष्ट
आँखा चिलायो भन्दै अस्पताल पुगेका व्यक्तिको आँखामा जे भेटियो जसले डाक्टरनै चकित !
नमुना पोष्टप्रकाशित मिति: २०७६ फागुन १६, शुक्रबार (१ साल अघि)
एजेन्सी । सामाजिक संजाल साथै अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यममा एक समाचार यति धेरै फैलियो की जसको कारण थाहा पाउँदा जो कोही हैरान हुनेछन् । प्राप्त जानकारी अनुसार त्यहाँ भएको के रहेछ भने । एक व्यक्ति आँखा बेस्सरी चिलाएपछि अस्पताल पुग्छन् । आँखा चेक गर्न पुगेका बिरामीको जब डाक्टरले चेक गर्छन् त्यहाँ सबै झस्किने अवस्था आउँछ ।
आँखा चेक गर्दा जे देखियो डाक्टर नै चकित बने । त्यसपछि उक्त व्यक्तिको आँखाबाट जुका निकालिएको थियो । आफ्नो आँखा चिलायो भन्दा अस्पताल पुगेका उनलाई चिकित्सकहरुले आँखामा जुका फेला पारेका थिए। घटना भारतको भएको बुझिएको छ। धेरै समय देखि आँखा दुख्ने र चिलाउने समस्याले ग्रसित उनी अस्पताल पुगे पछि उनको आँखामा जुका परेको खुलासा भएको हो।पिडितको आँखाबाट जुका निकाल्दै गरेको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरलनै बनेको छ।
भिडियोमा चिकित्सक एक व्यक्ति आँखाको सर्जरी गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ।आँखाबाट चिकितासकले लगभग १५ सेन्टिमिटर लामो जुका निकालेको दृश्य पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सर्जरिमा संलग्न चिकित्सकले बताए अनुसार समयमानै उक्त व्यक्तिको आँखाबाट जुका ननिकालिएको भए पिडित व्यक्तिले केहि दिनमानै ज्योति गुमाउने थिए।चिकित्सकहरुले आँखाबाट जुका निकाल्न भन्दा पनि उक्त जुकालाई आँखाबाट जीउँदै निकाल्नुलाई ठूलो चुनौतीको रुपमा लिएका थिए।
यदि जुकाको आँखामै मृत्यु भएको भए पिडित व्यक्तिको आँखामा अन्य इन्फेक्सनको जोखिम पनि थियो।चिकित्सकहरुले गरेको सफल सर्जरी पछि पिडित व्यक्ति अहिले स्वस्थ रहेका छन्। यति धेरै लामो जुका आँखाबाट निकालिएको विश्वमा सम्भवत पहिलो घटना भएको सर्जरिमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ रहेको छ।